Ciidamo loogu magac-daray Hiil oo la filayo inay maantay kasoo dagaan Moqdisho, kuwaasoo ka imaanaya Jabbuuti. – Radio Daljir
Juunyo 30, 2012 5:06 b 0
Moqdisho, June, 30 – Waxaa maantay la filayaa inay Moqdisho soo gaaraan cutubyadii ugu horeeyay oo ah ciidamo ka socda dalka Jabbuuti, kuwaasoo loogu magic-daray Hiil.
Cutubyadaan ayaa qayb ka noqon-doono 800 oo askari oo horay ay Soomaaliya ugu soo dirtay dawladda jamhuuriyadda Jabbuuti, waxaana Moqdisho ka socota diyaar-garaw ciidankaasi maantay lagu soo dhawaynayo.
27-kii June oo ku beegnayd maalinta madax-bannaanida Jabbuuti ayay ahayd markii madaxwayne Ismaaciil Cumar Geele uu ku dhawaaqay ciidamadaan loogu magic-daray Hiil.
Radio Daljir Boossaaso.
Baarlamaanka Puntland oo maantay ka dooday dhaqaamaha, siyaasadda, iyo ammaanka Puntland.